Mangarahara momba ny tetibolam-panjakana Tena mbola ratsy ny naoty azon’i Madagasikara
Mirafitra 2 ny antenimiera eto Madagasikara dia ny antenimierandoholona sy antenimieram-pirenena, hoy ireo fiarahamonim-pirenena. Mifidy sy tokony hanara-maso ny tetibola fidiany izy ireo.
Nosy-Be Vonona handray ireo mpizahatany
Nidina ifotony nijery ny fizotran` ny fiomanana amin`ny fisokafana ho an`ny mpizahatany avy any ivelany ny minisitry ny fitaterana, ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetry ny andro, Joel Randrimandranto, omaly.
Tetikasa fihariana Efa namoahana 25 miliara ariary
Hatreto dia orinasa miisa 392 manerana ny nosy no efa nandray ny fanohanan’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny tetikasa Fihariana na hoe “Miarina by Fihariana”, raha ny fampitam-baovao voaray momba izany omaly.
Harena an-kibon’ny tany 50 Ar no hividianana ny « Mica » any Betroka
Manao antso avo amin'areo mpitondra fanjakana , indrindra ny Minisitra misahana ny Varotra , ny Minisitra misahana ny Harena akibon'ny tany ny Solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo voafidy tany Betroka. Mitotongana izay tsy izy intsony ny vidin'ny
Fanarenana ny toekarena “Tsy ho vita raha tsy eo ny sehatra tsy miankina”
“Tokony jerena ny fanarenana ny toekarena indrindra ny fanampiana ireo orinasa tsy miankina izay fototry ny fampandrosoana.
Raha tsiahivina dia lany saingy nasiam-panitsiana teny anivon’ny Antenimierandoholona­ ny LFR 2020. Notakian ’ireo loholona hatramin’ny farany my hamerenana ao anatin’ny tetibolan’ny antenimierandoholona­ ny vola mitetina 7 miliara Ariary izay voarakitra eny anivon’ny ministeran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola (MEF) satria 23 miliara Ariary ny tetibola natokana ho an’ ity andrimpanjakana ity saingy 16 miliara Ariary ihany no voasoratra ao anatin’ny PLFR 2020. Tsiahivina hatrany fa ny “Sénat” no azo ambara fa andrimpanjakan` ny mpanohitra satria mbola ny antoko HVM no manana ny maro an` isa ao aminy. Araka ny loharanom-baovao dia hafana ny adihevitra mahakasika an` ity LFR ity anio satria mety hiova ho politika izay ho fanapahan-kevitra tapaka mandritra ny fivoriana.